Waddanka Urdun Oo Soomaaliya U Ballan Qaaday Xidhiidh Cusub Oo Iskaashi iyo Wada Shaqayn – Tusmoonline.com
Waddanka Urdun Oo Soomaaliya U Ballan Qaaday Xidhiidh Cusub Oo Iskaashi iyo Wada Shaqayn
Wararka	December 22, 2016	112	Like
Madaxweynaha Dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Shalay oo Arbaca ahayd guddoomay dhambaal uu u soo diray boqorka dalka Jordan Boqor Cabdalla Al-thani Ibnu Xuseen Bin Dalaal.
Ra’iisul wasaare ku xigeen ahna wasiirka Maalgashiga ee dalka Jordan Dr. Jawaad Al-Anaani oo maanta booqasho ku yimid magaalada Muqdisho ayaa dhambaalkan soo gaarsiiyey madaxweyne Xasan Shiikh.
Dr. Jawaad Al-Anaani ayaa kaga warbixiyey madaxweynaha sida Boqortooyada Jordan ay u daneyneyso xoojinta iyo iskaashiga Soomaaliya ay la leedahay, sidoo kale waxa uu ammaanay doorashooyinka Soomaaliya ka socda oo uu ku tilmaamay hab cusub oo loogu gudbi karo nidaam Dimoqraadiyaddeed oo buuxa.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa uga mahadceliyey Boqorka dalka Jordan dhambaalka uu u soo diray, waxaana uu sheegay in labada dal ay yihiin walaalo taariikh ay ka dhaxeyso.
Xasan Shiikh ayaa xusay in la joogo waqtigii uu bilaaban lahaa dedaalka Jordan ay uga qeyb-qaadaneyso horumarka iyo dib u dhiska Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca mashaariicda wax soo-saarka iyo soo celinta adeegyada bulshada.
Madaxweynaha Soomaaliya, ayaa salaan u diray boqorka Jordan, isla markaana ballan qaadey in xiriirka labada dal uu noqon doono mid xoogeysta ayna iskaashi buuxa ka yeelan doonaan dhinaca wad wada qabsiga, iyadoo la eegayo danaha labada shacab.
Wakaalladda Wararka Urdun ee Petra ayaa baahisay in dhambaalka loo gudbiyey Madaxweyne Xasan Sheekh uu ku saabsanaa casuumad la xiriirta Madaxweynaha Somalia inuu ka soo qeyb galo Shirka Madaxda Carabta ee ay Dowladda Urdun marti-gelin doonto bisha Maarso ee sannadka soo socda ee 2017-ka.
Kulankaasi ayaa la sheegay in looga hadli doonaa Xoojinta Iskaashiga iyo Midnimadda Dowladaha Carabta, waxaana haddii Madaxweyne Xasan Shiikh looga guuleysto doorashada dhaceysa bisha Janaayo ee soo socota, shirkaas ka qeyb galaya madaxweynaha xiga ee Somalia.